mudug Archives - Ceelhuur Online
Home > Posts Tagged mudug
Xogta Deegaanadii ay Alshabaab qabsadeen Koofurta gobolka Mudug
July 7, 2018 July 7, 2018 admin306
Ururka Alshabaab oo ciidankoodu shalay galab isku fidiyey Tuulooyinka Baraag Farey iyo Waable ee koofurta gobolka Mudug, ayaa wararka halkaas saaka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in wali ku sugan yihiin deegaanadii ay qabsadeen. Alshabaab ayaa la sheegayaa in ay gubayaan beeraha, aqalada iyo hantida ma guurtada ah ee ay halkaas ugu tageen. Waxaana […]
Alshabaab oo galabta isku fidiyey deegaano horleh koofurta Mudug
July 6, 2018 admin4271 Comment on Alshabaab oo galabta isku fidiyey deegaano horleh koofurta Mudug
Waxaa maalintii saddexaad dagaal dhexmaray ciidanka deegaanka iyo ciidanka Alshabaab, dagaalka ayaa maanta dib uga qarxay deegaanka Baraag farey oo 20 km u jirta Magaalada Ceelhuur koofurta Gobolka Mudug. Ciidanka Alshabaab abaara duhurkii weerar ku ekeeyey ciidanka deegaanka oo halkaas fadhiisan ku lahaa, Waxaa dagaal saacad socday alshabaab kula wareegeen gacan ku heynta Tuulada Baraag […]
July 5, 2018 July 5, 2018 admin525
Wararkii ugu dambeyey Xaalada Deegaanka Caad gobolka Mudug
July 4, 2018 July 4, 2018 admin434
Waxaa dagan xaalada deegaanka Caad ee degmada Xarardheere gobolka Mudug, halkaas oo saaka dagaal ku dhex maray ciidanka deegaanka iyo Ururka Alshabaab. Dagaalka ayaa saaka dhacay gudaha deegaanka Caad, halkaas oo ciidanka deegaanku weerareen saldhiga Alshabaab ku lahaayeen gudaha Magaalada. Alshabaab oo gurmad ka helay degmada Xarardheere ayaa markii dambe dib ula wareegay Magaalada Caad. […]
October 21, 2016 October 21, 2016 admin3982 Comments on Burcad-badeed Sii daayey 22 Badmaax kana Qaadatay 2.2 Milyan oo Madax furasho ah
Shabakada Ceelhuur Online ayaa goordhow heshay Xog ah in koox burcadbadeed Soomaali ah ay sii dayeen 22 badmaax oo isugu jiray 13 Badmaax oo u dhashay dalka China, halka 9 kalena u dhasheen dalka Taiwan, waxaa ayna ka qaateen lacag gaaraysa 2.2 Milyan dollar Maraykanka ( Laba Milyan iyo laba boqol oo kun). Diyaarad yar […]